Star Wars မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားသုံးသပ်ခြင်း | Gadget သတင်း
ငါ၏ဖြစ်ကြောင်းကိုကောင်းတစ် ဦး ပန်ကာအဖြစ် Star Wars Saga, ဤမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ၏စမ်းသပ်မှုသည်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းသာမက၎င်း၏ပစ္စည်းများ၏ထိတွေ့မှု၊ ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုမှအဆက်မပြတ်ထုတ်လွှတ်သည့်တေးသံအရည်အသွေးနှင့်ရုပ်ရှင်များမှလူသိအများဆုံးအသံများ (Chewaka ၏အသံ၊ R2D2 ၏ beeps, ... ) နှင့် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များသည်မူလလေယာဉ်ပျံသန်းမှုပုံစံကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာမောင်းနှင်နိုင်သည် ကြယ်စစ်ပွဲမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ ငါတို့ငန်းပြန်တယ်။ ရက်အနည်းငယ်လောက်မှာရုပ်ရှင်တွေထဲကအကျော်ကြားဆုံးသင်္ဘောနှစ်စင်းဖြစ်တဲ့ TIE Fighter Advanced X1 နဲ့ X-Wing T-65 ကိုရှေ့ပြေးစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
5 Star Wars မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ၏စျေးနှုန်း
ကျနော်တို့မှတ်ချက်ချသကဲ့သို့, ဒီဇိုင်းခြောဖြစ်ပါတယ် ဒီထုတ်ကုန်၏အကြီးအစွမ်းသတ္တိကို; ၀ ယ်သူများ၏ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်များမှာ Star Wars ပရိတ်သတ်များဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများနှင့်အမြင်အာရုံဖြင့်မယုံကြည်ပါကမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကိုဝယ်ယူမည်မဟုတ်ကြောင်းသူတို့ကောင်းစွာသိသောကြောင့်အလွန်ယုတ္တိတန်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီပစ္စည်းတွေကိုပလတ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်တွေရဲ့သက်တမ်းအရင့်သတ္တုရိုင်းတွေကိုတုပနိုင်ပါတယ်။ သူတို့မှာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ထိတွေ့မှုရှိတယ်၊ လက်တွေဆေးခြယ်ထားတယ်၊ သူတို့ထည့်သွင်းထားတဲ့အသေးစိတ်အဆင့်ဟာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်စင်းမှာမျှော်လင့်ထားတာထက်အများကြီးပိုတယ်။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ကိုလက်တွေ့ကျကျပြုလုပ်သည် mockup ပျံသန်း သူတို့ကိုသင်ထားနိုင်အောင် သင်သူတို့ကိုမစမ်းသပ်သည့်အခါသင့်အခန်းကိုအလှဆင်ပါ.
ကျန်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်လည်းအလွန်အောင်မြင်သည်။ Controller ရဲ့ခံစားချက်၊ အလေးချိန်၊ မီး၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ၏အသံနှင့်အခြားအရာမဟုတ်သည့်အတွက်အလွန်လှပသောသေတ္တာ၏သင်တန်း။ ငါတို့ပြောသကဲ့သို့ သူတို့ကဒီဇိုင်းအဆင့်မှာထုတ်ကုန် 10 ဖြစ်ကြသည်; တိုးတက်ဖို့ဘာမှမရှိဘူး။ သူတို့ဟာမခိုင်မြဲဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့အမှန်တရားကတော့သူတို့ရဲ့အလေးချိန်နိမ့်ကျမှုကြောင့်အလွန်ထိတွေ့မှုတွေကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။
ပန်ကာများသည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏အောက်ခြေတွင်ရှိပြီးသူတို့၏အရောင်နှင့်ဒီဇိုင်းကြောင့်တည်ရှိသည် ဘယ်အချိန်မှာလေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်လက်တွေ့မမြင်ရတဲ့ဖြစ်ကြသည် ယင်း၏လေယာဉ်မှူးစဉ်အတွင်းလေယာဉ်များ၏သရုပ်မှန်တိုးတက်စေရန်ကူညီပေးသည်။
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကိုထိန်းချုပ်ထားသည် ဘူတာရုံ ၎င်းသည် 2,4 GHz အမြန်နှုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်အင်ပါယာ (သို့) ခုခံမှုရှိမရှိပေါ် မူတည်၍ အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုခြင်းအပြင်လေယာဉ်မှူးအားအထူးမက်လုံးတစ်ခုထပ်ပေးသည် ဇာတ်ကောင်များ၏မူလအသံထုတ်လွှတ်မှု ပျံသန်းနေစဉ်အတွင်းသင်အပေါ်ချီးကျူးခြင်းနှင့် အဆိုပါ Saga ၏တေးသံမှလူသိအများဆုံး themes များ။ သငျသညျ Galactic စစ်တိုက်အလယ်၌လေယာဉ်မှူး၏ဖိနပ်သို့ပိုပြီးရစေလိမ့်မည်ဟုအထူးပူးတှဲသံသယမရှိဘဲ။
ဒါဟာအတော်လေးလေးလံသောနှင့်ကြီးမားသော command ကိုဖြစ်၏ အသံအရည်အသွေးကောင်းနှင့်အသံထုတ်လွှင့်ရန်စပီကာများလိုအပ်သည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များအပြင်, တစ်ခုချင်းစီကို command ကိုကသူပိုင်သောအခြမ်း၏သင်္ကေတနှင့်အတူပုံနှိပ်သည်။
Battle mode သည်ဤမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အပျော်ရွှင်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအတွက်သင်ခွင့်ပြုသည့် app တစ်ခုကို download ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် အများဆုံးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ် ၂၄ ခုပါ ၀ င်သောတိုက်ပွဲကိုစီစဉ်ပါ နှင့်၎င်းမှတစ်ဆင့်သင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်ခုစီရရှိသောသက်ရောက်မှုများကိုရေတွက်။ သင်၏လူမှုကွန်ယက်များသို့ရမှတ်များကိုတင်နိုင်သည်။ သင်္ဘောတစ်စီးချင်းစီသည်အများဆုံး ၃ ကြိမ်အထိရောက်နိုင်သည်။ ထိုအချိန်တွင်သူသည်မြေပေါ်သို့ကျသွားပြီးအလိုအလျောက်ဆင်းသက်နိုင်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းအပြင် (သင်တိုက်ပွဲ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအချက်အလက်အားလုံးကိုတွေ့နိုင်သည့်နေရာ) အပြင်လေယာဉ်မှူးတစ် ဦး စီသည်သူ၏အမိန့်အပေါ်တွင်အနီရောင် LEDs ၃ ခုမှတစ်ဆင့်သူရရှိခဲ့သောသက်ရောက်မှုအရေအတွက်ကိုမြင်နိုင်လိမ့်မည်။
တိုက်ပွဲသည်တကယ်ပျော်စရာကောင်းရန်အတွက်လေယာဉ်မှူးများသည်အနိမ့်ဆုံးလေယာဉ်မောင်းရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များစွာနှင့်အတူအလွန်ပျံသန်းနိုင်သည့်အတွက်ပျော်စရာသီချင်းများနှင့်နည်းဗျူဟာများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၃ စက္ကန့်ထက်မနည်းလျှင် ၅၆ ကီလိုမီတာနှုန်းထိရောက်နိုင်သည်။
၎င်းသည်စစ်ပွဲ၏အပူချိန်တွင်“ LiFi” ထွန်းလင်းသောအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည် ကြိုးမဲ့နည်းပညာ ဤမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များတွင်ထည့်သွင်းထားခြင်းနှင့်၎င်းသည်ရိုးရာ Wifi ထက်အဆ ၁၀၀ ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ ၎င်းသည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်စင်းသည်အခြားတစ်ခုသို့ထိသောအခါမည်သည့်အချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိမ့်မည်၊ ဘ ၀ ၏အမှတ်ကိုနုတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့ဟာအမြန်နှုန်း ၅၆ ကီလိုမီတာနဲ့အဝေးကြီးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ကအမြင့်ထိန်းချုပ်မှုရှိတယ်, အလိုအလျောက် take-off နှင့်ဆင်းသက်မှုစနစ်အမျိုးမျိုးသောလေယာဉ်မြန်နှုန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေး mode ကို။ ပုံမှန်အားဖြင့်360º loops များကိုခွင့်ပြုပြီးမီးများကိုဖွင့ ်၍ ပိတ်သည်။
အပျက်သဘောဆောင်သောအချက်အနေဖြင့်၎င်း၏ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်ကြောင့်အလွန်နိမ့်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုသည်ပျံသန်းမှု၏ပြင်းထန်မှုအပေါ် မူတည်၍ ၆-၈ မိနစ်သာသာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်တိုက်လှန်နေရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းငယ်တိုတောင်းမည်။
Star Wars မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ၏စျေးနှုန်း
ဤမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ၏စျေးနှုန်းသည်စစ်မှန်ကြောင်းလက်မှတ်နှင့်နံပါတ်ပါသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အတော်လေးတတ်နိုင်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် တစ်ခုတည်းကိုသာ€ 69,90 များအတွက် Juguetronica မှာဝယ်ပါ ဤ link များမှ:
TIE Fighter အဆင့်မြင့် X1 ကိုဝယ်ပါ
X-Wing T-65 ကိုဝယ်ပါ
သင်ဆန္ဒရှိပါက၊ အထူးစုဆောင်းရဲ့ထုတ်ဝေ ဒီသီချင်းရဲ့အလင်းရောင်နဲ့ဂီတပါတဲ့တေးသံပါတဲ့တေးသံကနေအပျော်အပါးအများဆုံးရနိုင်မှာပါ Star Wars မှ geeks.
အလွန်ပျော်စရာစစ်တိုက် mode ကို
Star Wars မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ
TIE တိုက်လေယာဉ်အဆင့်မြင့် X1 X-Wing ကို T-65
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » Star Wars မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားသုံးသပ်ခြင်း
ဆောက်လုပ်ရေးကိုဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်စတင်သည်